किन घाम लागे पनि चिसो बढ्दैछ ? यस्तो छ कारण !:: Mero Desh
किन घाम लागे पनि चिसो बढ्दैछ ? यस्तो छ कारण !
Published on: १० माघ २०७६, शुक्रबार १५:०२
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनयता घाम लागे पनि बढी चिसो महसुस गरिएको छ। एक सातादेखि दिनहुँजसो घाम लागे पनि खासगरी बिहान बेलुका बढी चिसो महसुस गरिएको छ। अहिले किन चिसो बढेको भनी राखिएको जिज्ञासामा मौसमविद् शान्ति कँडेलले कुनै पनि किसिमको मौसमी प्रणाली विकास
नभए पनि यस्तो अवस्था अझै केही दिन जारी रहने बताइन्। उनले चिसो बढे पनि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम शून्य डिग्रीमा नझर्ने र विस्तारै तापक्रम बढ्दै जाने बताइन्। राजधानीसहित देशका अन्य भेगमा पनि पछिल्ला दिनमा चिसो महसुस गरिएको छ। तराईमा हुस्सु र कुहिरोले बिहान र साँझपख बढी चिसो हुने गरेको छ। अहिले तराई क्षेत्रमा कुहिरो लागेको छ, भने देशका पूर्व र मध्यका केही स्थानमा आंशिक बदली रहेको मौसमविद् कँडेलको भनाइ छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार शुक्रबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम दुई दशमलव आठ र अधिकतम तापक्रम १८ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस रहेको छ। महाशाखाले तराईको हुस्सु÷शीतलहरसम्बन्धी आज बुलेटिन निकालेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागबाहेक बाँकी तराईका भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको जनाएको छ। अपराह्नपछि विस्तारै कुहिरो हटेर जानेछ। अबको केही दिन सामान्यतया मौसम सफा रहने जनाइएको छ।
हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्‍दार
सेनाको हेलिकप्टरबाट शान्तिलाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिँदै । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
कालिकोट : नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कालिकोटकी एकजना गर्भवतीको उद्दार गरिएको छ । सुत्केरी व्य‍था जटिल बन्दै गएपछि जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिका ७ निवासी भरत बटालाकी पत्नी २१ वर्षीया शान्ति बुढा बटालाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो।
दुई दिन अघिदेखि सुत्केरी व्यथाले थलिएकी शान्तिलाई हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत पठाइएको स्थानीय दिपेन्द्र बुढाले जानकारी दिए। उनका अनुसार शान्तिलाई बुधबार राती ११ बजेबाट सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि गाउँ नजिकै रहेको स्वाथ्य चौकी माल्कोटमा भर्ना गरिएको थियो । सुत्केरी व्यथा जटिल बन्दै गएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत रिफर गरिएको स्वास्थ्य चौकी माल्कोटमा कार्यरत अनमी मिट्ठु सहकारीले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुँदा पनि त्यहाँ विशषेज्ञ डाक्टर, औषधि र उपकरण नहुँदा उनलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रिफर गर्नुपरेको उनले बताइन् ।
सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तरगत सुत्केरी महिलाका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने कार्यक्रम अनुसार नरहरीनाथकी शान्ति बुढा बटालाको उद्धार गरिएको हो ।जुन सेवाका बारेमा स्थानीय नागरिकले जानकारी नपाउँदा गत पौष २ गते नरहरीनाथ गाउँपालिका ९ की पार्वती दर्जीको सुत्केरी हुन नसक्दा घरमै ज्यान गएको थियो । गत पौष २७ र २८ गते सम्पन्न नरहरीनाथ गाउँपालिकाको छैटौं गाउँसभामा गर्भवती, सुत्केरी तथा अति इमरजेन्सी बिरामीको तत्काल उद्धारका लागि ९ वटै वडा, गाउँपालिका भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई चनाखो रहन निर्देशन दिएको गाउँपालिका प्रवक्ता गगन फडेराले बताए ।